Izindaba - Abaholi bomhlaba bathola isibhamu sokugoma i-COVID-19 esenziwe yiChina
Amazwe amaningi, kubandakanya iGibhithe, i-UAE, iJordani, i-Indonesia, iBrazil nePakistan, agunyaze imithi yokugoma ye-COVID-19 ekhiqizwa yiChina ukuze isetshenziswe ngokuphuthumayo. Futhi amanye amazwe amaningi, kubandakanya iChile, iMalaysia, iPhilippines, iThailand neNigeria, ayale imijovo yokugoma yamaChina noma ayabambisana neChina ekutholeni noma ekukhipheni imigomo.
Ake sihlole uhlu lwabaholi bomhlaba abathole isibhamu sokugoma saseChina njengengxenye yomkhankaso wabo wokugoma.
UMongameli wase-Indonesia uJoko Widodo
UMongameli wase-Indonesia uJoko Widodo uthola umjovo wokugoma i-COVID-19 owenziwe yinkampani ye-biopharmaceutical yase-China iSinovac Biotech ePresidential Palace eJakarta, e-Indonesia, ngoJan 13, 2021. Umongameli ungowokuqala e-Indonesia ukugonywa ukukhombisa ukuthi umuthi wokugoma uphephile. [Isithombe / Xinhua]
I-Indonesia, ngokusebenzisa i-Food and Drug Control Agency yayo, ivume umuthi wokugoma we-China biopharmaceutical wase-Sinovac Biotech we-COVID-19 ozosetshenziswa ngoJan 11.
I-ejensi ikhiphe ukugunyazwa kokusetshenziswa okuphuthumayo komuthi wokugoma ngemuva kwemiphumela yesikhashana yokuhlolwa kwayo sekwephuzile ezweni kukhombise izinga lokusebenza elingamaphesenti angama-65.3.
UMongameli wase-Indonesia uJoko Widodo ngoJan 13, 2021, wathola umuthi wokugoma i-COVID-19. Ngemuva kokuthi umongameli, umphathi wamasosha wase-Indonesia, umphathi wamaphoyisa kuzwelonke kanye noNgqongqoshe Wezempilo, phakathi kwabanye, nabo bagonyiwe.
UMengameli waseTurkey uTayyip Erdogan uthola isibhamu somuthi wokugoma weSinovac CoronaVac coronavirus esibhedlela i-Ankara City Hospital e-Ankara, eTurkey, ngoJan 14, 2021. [Isithombe / Xinhua]
I-Turkey yaqala ukugoma ngobuningi i-COVID-19 ngoJan 14 ngemuva kokuthi iziphathimandla zivume ukusetshenziswa okuphuthumayo komuthi wokugoma waseChina.
Bangaphezu kuka-600,000 abasebenzi bezempilo eTurkey abathole imithamo yabo yokuqala yezinhlamvu ze-COVID-19 ezenziwe yiSinovac yaseChina phakathi nezinsuku ezimbili zokuqala zohlelo lokugoma.
UNgqongqoshe Wezempilo waseTurkey uFahrettin Koca ngoJan 13, 2021, wathola umuthi wokugoma i-Sinovac kanye namalungu omkhandlu wezokweluleka waseTurkey, kusasele usuku ngaphambi kokugoma ezweni lonke.
Iphini Likamongameli we-United Arab Emirates (UAE), uNdunankulu kanye noMbusi waseDubai USheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
NgoNovemba 3, 2020, uNdunankulu kanye nePhini likaMongameli we-UAE nombusi waseDubai uSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ubhale isithombe sakhe ethola isibhamu somuthi wokugoma i-COVID-19. [I-akhawunti ye-Twitter / kaHH Sheikh Mohammed]
I-UAE yamemezela ngoDisemba 9, 2020, ukubhaliswa ngokusemthethweni komuthi wokugoma i-COVID-19 owenziwe yiChina National Pharmaceutical Group, noma iSinopharm, kubika isikhulu sezindaba se-WAM.
I-UAE yaba yizwe lokuqala ukuhlinzeka ngemishanguzo eyenziwe ngamaShayina i-COVID-19 kuzo zonke izakhamizi nezakhamizi mahhala, ngoDisemba 23. Ukuhlolwa e-UAE kukhombisa ukuthi umuthi wokugoma waseChina uhlinzeka ngempumelelo ngamaphesenti angama-86 ekulweni nokutheleleka kwe-COVID-19.
Umuthi wokugoma wanikezwa Ukugunyazwa Kokusetshenziswa Okuphuthumayo ngoSepthemba ngumnyango wezempilo ukuvikela abasebenzi abaphambili kakhulu abasengozini ye-COVID-19.
Izilingo zesigaba III e-UAE zifake amavolontiya angama-31,000 avela emazweni nezifunda eziyi-125.